ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ပိုမိုထောက်ပံ့ရန် ယူနီဆက် နှင့် Sinovac သဘောတူ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းမြို့ ၌ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက Sinovac Biotech ကုမ္ပဏီ ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနမူနာများအား ပြသနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကမ်ပလာ၊ ဇူလိုင် ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ COVAX အစီအစဉ်ဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ပိုမိုထောက်ပံ့သွားရန် ကုလသမဂ္ဂကလေးများရံပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF)သည် တရုတ်ကုမ္ပဏီ Sinovac နှင့် လက်တလောတွင် သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
UNICEF က အဆိုပါသဘောတူညီမှုအားကြေညာပြီးတစ်ရက်အကြာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေးများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ဝေနိုင်ရန်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နှောင်းပိုင်းတွင် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှ UNICEF ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Munir Safieldin က တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
“ဒါကမှန်ကန်သေချာတဲ့ သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။ အလယ်အလတ်နဲ့ ဝင်ငွေနည်းတဲ့ နိုင်ငံတွေက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပိုမိုလက်လှန်းမီနိုင်ဖို့ အတွက် COVAX အစီအစဉ်နဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေ ပိုမိုအတည်ပြုပေးလျက်ရှိတယ်’’ ဟု Safieldin ကပြောသည်။
“တစ်ယောက်မလုံခြုံရင် လူတိုင်းလည်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိနိုင်ဘူး” ဟု၎င်းကဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
ထောက်ပံ့ရေးသဘောတူညီမှုမှတဆင့် ယူနီဆက်သည် COVAX အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောနိုင်ငံများအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ကာကွယ်ဆေး ကြိမ်ရေသန်း၂၀၀ အထိထိုးနှံနိုင်ရန် ကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ အဆိုအရ ကူးစက်ရောဂါများအားကာကွယ်ရန် ဖွံံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် သန်းပေါင်းရာချီ၍ ဆေးများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေ သူတို့ပြည်သူတွေ ကာကွယ်ဆေးပိုထိုးပေးနေချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးရဖို့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ခြားနားချက်ကိုတွေ့နေရတယ်’’ ဟု ပြင်သစ်မှ လှူဒါန်းသော ဆေးပစ္စည်းများအား ဇူလိုင် ၂၇ ရက်တွင် လက်ခံရရှိပြီးနောက် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Robinah Nabbanja က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကာကွယ်ဆေးက ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုလျှော့ချဖို့ သေချာတဲ့ နည်းလမ်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးက လူနာတွေကို ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်’’ ဟု Nabbanja ကဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။ (Xinhua)
UNICEF, Sinovac agree to supply more COVID-19 vaccines to developing countries
KAMPALA, July 28 (Xinhua) — The United Nations Children’s Fund (UNICEF) has recently signed an agreement with the Chinese firm Sinovac to supply developing countries with more COVID-19 vaccines via the COVAX mechanism.
The agreement gives hope for broadening access to vaccines in developing countries, UNICEF Representative to Uganda Munir Safieldin tweeted late Tuesday,aday after UNICEF announced the deal.
“This is certainly great news. The more approved vaccines available through COVAX, the more people in middle- and low-income countries can access the vaccines against COVID-19,” Safieldin said.
Through the supply agreement, UNICEF will have access to up to 200 million doses of vaccines in 2021 to supply the countries and territories participating in the COVAX initiative.
According to the World Health Organization, developing countries need hundreds of millions more jabs to fend off surging infections.
“We continue to seeadisparity in access to vaccines with developed countries vaccinating their people while developing countries are struggling to get vaccines,” Ugandan Prime Minister Robinah Nabbanja said, while receivingaFrench donation of medical supplies on Tuesday.
“We all know now that vaccination is the most sure way to reduce the spread of the pandemic. It also prevents patients from presenting severe symptoms,” Nabbanja added. Enditem